प्रदेश नं. १ मा सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा कडाई गरिने - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २५ पुष २०७६, शुक्रबार १६:५६
विराटनगर, २५ पुस । प्रदेश नं. १ मा आगामी फागुन १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा कडाई गरिने भएको छ । ऐन लागु भएको ७ वर्ष वितेपनि कार्यन्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ अनुसार कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन नपाउने व्यवस्था छ ।
तर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था आसपास खुलेआम रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण भईरहेको भन्दै फागुन १ गतेपछि प्रदेश सरकारले अटेर गरे कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको स्वस्थ्य जीवन प्रर्वद्धन अभियान अन्र्तगत सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन संवन्धिको अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटर भित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गरिने बताउनुभयो ।
फागुन १ पछि ऐनलाई पूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री घिमिरेले विद्यालयमा ‘जङ्क फुड’ पूर्णरुपमा निधेष गरिने समेत बताउनुभयो । विद्यालयमा ‘जङ्क फुड’ प्रयोग गरिएको भेटिएमा कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले शुरु गरेको स्वस्थ्य जीवन प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्र्तगत २० वर्ष उमेर समूह भन्दा माथि सवैको स्वास्थ्य परिक्षण गरिने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री घिमिरेले भन्नुभयो,‘ सुगर परिक्षण र क्यान्सर परिक्षण पनि गरिने छ ।’ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. शंकरप्रसाद अधिकारीले धूमपानको असर शरिरका हरेक प्रणालीमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले धुमपानबाट फोक्सोको क्यान्सर हुने मात्र भनेर नबुझन् पनि आग्रह गर्नुभयो ।
विद्यालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि तहगत रुपमा जानकारी दिन आवस्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा.सुरेश महतले सर्ने भन्दा नसर्ने रोग बढ्दो मात्रामा रहेको बताउनुभयो । जीवन शैलीमा परिवर्तनका लागि मन्त्रालयले स्वस्थ्य जीवन प्रवद्र्धन कार्यक्रम शुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि आगामी माघ ३ गते विराटनगरमा बृहत जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ । २०६८ सालमा जारी भएको ऐन अहिले सम्म कार्यन्वयनमा आउन नसकेको भन्दै विभिन्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सञ्चालकहरुले पूर्ण कार्यन्वयनका लागि जोड दिएका छन् ।
पोखरिया माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराईले विद्यालय आसपासमा खुलेआम रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण भईरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले शुरु गरेको अभियान निरन्तर चल्नुपर्नेमा उहाँले जोडदिनुभयो । सेन्ट जोसेफ स्कुलका रोहितजंग थपलिया, निहारिका कलेज अमित ढकाल, अर्कीड कलेजका दिपेश वाँस्तोला लगायतले ऐन कार्यन्वयनमा जोड दिनु भएको थियो ।
पथरीशनिश्चरेको न्याय सम्पादन व्यवस्थित
१३ विद्यालयका ६ सय विपन्न विद्यार्थीलाई न्यायो कपडा
विराटनगर, २८ साउन । विराटनगरका व्यापारी जितु भनिने जितेन्द्र रायको हत्या गर्ने योजना बनाएर आएका...